Huawei Y7 Prime 2019 na Huawei Y7 Pro 2019: Nkọwapụta ọkwa | Gam akporosis
Huawei Y7 Prime 2019 na Huawei Y7 Pro 2019: Usoro ntinye ọhụụ ọhụrụ
Huawei na-ahapụ anyị ozi zuru oke n'oge awa gara aga. Yana Y9 Prime 2019, ọhụrụ gị retractable igwefoto ekwentị. Akara ahụ na-ewetara ụdị ọhụụ ọhụrụ ya, Huawei Y7 Prime 2019 na Huawei Y7 Pro 2019. Newdị ọhụrụ ndị a pụtara maka nkọwapụta dị ala ha, mana ha kwesịrị iji ezigbo ego bịa.
Huawei Y7 Prime 2019 ọhụrụ a na Huawei Y7 Pro 2019 bụ ekwentị yiri. N'ezie, anyị nwere otu nkọwa nke abụọ, mana anyị na-ahụ naanị otu ọdịiche. Dị ka otu n'ime ngwaọrụ nwere ihe mkpịsị aka mkpịsị aka nke ọzọ enweghị nke ọ bụla. Ma ọ bụghị ya, ha bụ otu.
Akara ndị China na-emezigharị usoro ya na izu ndị a. Ahịa ya rịrị elu na nkeji iri na ise, karịsịa maka arụmọrụ dị mma nke njedebe ya. Ma ika ahụ na-achọkwa ime ka ngalaba ndị a dị mfe karị, ebe ha nwekwara ọnụnọ dị mma. Ha na-ahapụ anyị ugbu a na ụdị abụọ a.
1 Nkọwapụta Huawei Y7 Prime 2019 na Huawei Y7 Pro 2019
Nkọwapụta Huawei Y7 Prime 2019 na Huawei Y7 Pro 2019
N'ime afọ a niile, anyị ahụla ọtụtụ ekwentị n'ime ụdị akara ndị China. Abụọ a Huawei Y7 Prime 2019 na Huawei Y7 Pro 2019 na-eje ozi iji mezue ntakịrị nhọrọ ndị anyị na-ahụ n'ime ya. Ha dị mfe, ọ bụ ezie na ha na-abịa na a usoro nke oganihu. Emelitere imewe na mma ese foto. Ndị a bụ nkọwa nke ekwentị abụọ ahụ:
Ihuenyo: 6,26 sentimita asatọ na HD + 19: 9 mkpebi
Nhazi: Snapdragon 450
Nchekwa ime: 32 GB (gbasaa na microSD ruo 512 GB)
Rear igwefoto: 13 MP nwere oghere f / 1.8 + 2 MP
Usoro njikwa: Android 8 Oreo na EMUI 8.2 dị ka oyi akwa
Batrị: 4.000 mAh
Njikọ: Dual 4G, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, microUSB
ndị ọzọ: N'azụ mkpịsị aka na-agụ (na Y7 Prime)
Akụkụ: 158,92 x 76,91 x 8,10 mm
Ibu ibu: 168 grams
Huawei na-emegharia atụmatụ nke oke a, ịkụ nzọ na ihuenyo na akara ngosi yiri ọdịda nke mmiri na ekwentị abụọ. Ya mere, ha na-agba nzọ na ejiji ejiji taa. Na mgbakwunye, ha na-agbakwunye na ojiji nke nnukwu ngebichi, na nke ha 6,26 sentimita asatọ na nha. Huawei Y7 Prime 2019 na Huawei Y7 Pro 2019 na-ahapụkwa anyị ezigbo batrị, nke nwere ikike nke 4.000 mAh. Ya mere, anyị nwere ike ịtụ anya nnwere onwe dị mma n'okwu a, ihe dị mkpa na nso a.
Igwefoto bụ ihe gosipụtara nke ọma na ekwentị abụọ. Modelsdị abụọ ahụ na-abịa na igwefoto azụ abụọ, 13 + 2 MP. Yabụ na anyị nwere olile anya maka foto kacha mma. Na mgbakwunye, dị ka ọ dị na mbụ na akara ndị China, igwefoto abụọ nwere AI, maka nchọpụta ọnọdụ na nsonaazụ kacha mma na nhazi ha. N'ihe banyere Huawei Y7 Prime 2019 anyị na-ahụ ihe mmetụta mkpịsị aka, nke dị na azụ. N'aka nke ọzọ, Huawei Y7 Pro 2019 na-eji njirimara ihu dị ka usoro mmeghe na nke a.
Abụọ a Huawei Y7 Prime na Huawei Y7 Pro Ha anọworị na weebụsaịtị mba niile nke akara ndị China. Mana ugbu a, enweghị ozi gbasara ọnụahịa ha ga-enwe egosiri. Anyị enweghị ozi ọ bụla na ọnụahịa nke ngwaọrụ abụọ ahụ. Yabụ n'echiche a, anyị ga-echere ịmatakwu banyere akụkụ ndị a.
Ekwentị abụọ ga-enwe otu ụdị 3/32 GB, yana ịbịa na agba abụọ, acha anụnụ anụnụ abụọ. Agbanyeghị na Huawei Y7 Prime buputakwa ya na agba nke atọ, nke bụ onyinyo coral. Modelsdị abụọ na-emegharị ntinye ntinye nke akara ndị China, nke a na-atụ anya ịmalite n'oge na-adịghị anya. Anyị na-atụ anya ịmatakwu banyere mmalite ya na ụbọchị ole na ole sochirinụ.
Ihe ezi uche dị na ya bụ na e nwere ụfọdụ ọdịiche dị n'etiti ọnụahịa ha, n'ihi na Y7 Prime na-abịa na ihe mmetụta mkpịsị aka. Mana ugbu a anyị amaghị etu ọdịiche dị n'etiti ọnụ ahịa ekwentị abụọ a. Kedu mmetụta ndị ụdị ndị a na-ahapụ gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei Y7 Prime 2019 na Huawei Y7 Pro 2019: Usoro ntinye ọhụụ ọhụrụ
Google Play ga - atụ aro ka iwepụ ngwa ndị ị na - ejighi
Ebe i nwere ike ibudata gam akporo Q wallpaper